Iyo Inokurumidza Kukura Dhijitari Kushambadzira Msika | Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 18, 2013 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Takasangana neasina purofiti svondo rapfuura muhofisi medu avo vakagadzira zvinotevera zvinoshamisa paFacebook. Nekudaro, yavo bhajeti yakatenderwa chete ine mitsara zvinhu zve terevhizheni uye redhiyo kushambadzira sevoruzhinji kushambadzira bhajeti. Iyi inyaya nevazhinji vasiri purofiti… madhairekitori akaomarara sezvavanotungamira bhajeti zvichibva pazvipo izvo zvave zviripo kwemakumi emakore.
Hazvirevi kuti isu tiri poo-pooing terevhizheni neredhiyo (tinoita chikamu pane redhiyo), ndezvekuti ivo chete masvikiro anodhura ayo anoda kuve akaiswa zvakanaka sechikamu chemusanganiswa wekutengesa. Dhijitari midhiya inopa yakaderera-mutengo, yakakwira goho mikana - kunyanya nemasangano asingabatsiri uko vashandi nevatengi vane shungu kwazvo. Nhepfenyuro yepamhepo inopa mukana wekuti ubvise moto, uye vateveri vako nevateveri kuti uuparadzire. Izvo chaizvo zvakasiyana nechero yechinyakare sosi.
Kana munhu wepakati akafumurwa kune zviuru zvitatu zvekushambadzira mameseji pazuva, iwe unoda kuona kuti mota yako yekushambadzira ichakusvitsa kune chaunoda chaunoda. Iyo nyore yeInternet yekuwana yakagadzira hombe yekutsvaga yekugedhi yevatengi vanoda chako chigadzirwa kana sevhisi. Paunenge uchienzanisa mitengo yeInternet kushambadzira nezvakanakira, zviri nyore kuona kuti nei uyu asiri musika wekuregeredza.
The quote pamusoro uye infographic pazasi kubva kuAdvice Interactive Boka rinotarisisa kukura kwekushambadzira kwedhijitari nekufamba kwenguva zvine chekuita nenhau dzechivanhu.
WeVideo: Online Vhidhiyo Kugadziridza uye Kubatana
Aug 30, 2013 pa 3: 40 AM
Hi Douglas, ndinotenda nekuratidzwa. Ini ndinobvuma kunyanya kuti vatengi vari kusanganisa vhidhiyo yedhijitari zvakanyanya uye zvakanyanya muhupenyu hwavo hwezuva nezuva, kunyange vangangodaro vasina kugara pamasofa avo kuti vaite izvi zvinodiwa. Vazhinji vari kuona mavhidhiyo pamahwendefa uye nhare mbozha, chero kupi uye kwese kwese. Kana chiratidzo chedu chaicho chakanangana nekubatana nevatengi ava, saka zvine hungwaru kuti vashambadzi vadzidze nekugona kushambadzira vhidhiyo yedhijitari.
Aug 30, 2013 pa 7: 16 AM
Great point @jin_kaz: disqus! Ndiri kutoshamiswa nenhamba yemakambani anobhadhara kushambadzira asi ASINA kuisa vhidhiyo kushambadzira mune izvo.